Ku xir macluumaadka, Map-ka AutoCAD - Bentley Map - Geofumadas
Abriil, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Mashruucaan waxaan rabaa in aan isbarbardhigo siyaabaha loo heli karo database iyada oo la socdo goobaha jimicsiga ee AutoDesk iyo Bentley.
Waxaan u isticmaali jiray:
AutoDesk 3D 2008 (Waxaa ka mid ah Khariidadda AutoCAD)
AutoCAD 3D 2008 Bentley Map V8i
Faylka, isku xir xogta ... Isku xidhiidh:
Xaafadaha, xogta, isku xir
AutoCAD waxay xoojinaysaa dhamaan isku xirka macluumaadka kala duwan ee halkan:
Sawir Raster ama Dhulka
Intaa waxaa dheer Inaad ka soo dhoofiso waxaad heli kartaa:
ESRI (.shp, e00, E00, Caawinta ArcInfo)
GML (gml, xml, gml.gz) iyo MasterMap
sdts (kor u qaadey by USGS)
vpf, ft (laga bilaabo heerka millatariga)
Bentley halkan waxay kuxiriirtaa oo kaliya xiriir la leh Database:
OLEDB udl (SQL Server iyo Oracle)
BUDBC (OLE DB, Native SQL, iyo kuwa kale ee Microsoft)
Laga soo bilaabo maamulaha Raster, xogta ayaa la heli karaa:
ESRI (mxd iyo lyr)
Nooc kale oo ah rasters, qaabab badan oo ka badan AutoDesk laakiin ma isku mid.
Laga soo bilaabo Ku soo dhoofinta inaad hesho:
Oracle Spatial (sida xogta GIS)
Faylasha Shp (sida fayl cad)
Laga bilaabo Furan waxaad heli kartaa:
Ma heli karo xogta:
WFS (Adeegyada muuqaalka bogga)
Inkastoo qaar ka mid ah kuwaan la samayn karo ODBC.
Guud ahaan, labada qalab waxay ku dhawyihiin hawlaha la midka ah, in kastoo kiisaska AutoDesk ay ku badan tahay hal guddi oo xiriir la leh adeegyada xogta. Marka laga hadlayo Bentley qaar ka mid ah waxay ka socdaan maamulaha raajada, soo dejinta iyo furan.
In AutoCAD tani waa xaalado ka fiican Bentley, ugu yaraan helitaanka xogta MySQL iyo ArcSDE iyo MapGuide, iyada oo aan loo baahnayn in ay u adeegsadaan qalabka gadashada ODBC.
Sida heerarka Nice halkaas, AutoCAD kuu keenaa faa'iido ah ee ay helaan WFS, inkastoo markii wms ka hor waxaa loogu talagalay Bentley kor u dhigaysa this version V8i sida AutoCAD ka hor inta sameeyey ... record, aniga ma isticmaalaya version 2009 ah. Hase yeeshee, labadaba labadoodaba dib ayaa looga tagay, iyada oo tixgelinaysa in qiimaha jaban ama qalab bilaash ah ay si fiican u sameeyaan ... ha keligii u adeegaan xogta.
Si loo furo ama loo dhoofiyo xogta AutoDesk waxay leedahay wax ka badan Bentley Map sida, waxaan soo saarnay tusaalayaal aasaasiga ah inkastoo aan la fahmin sida isku xirnaanta xogta sababtoo ah waa in la soo dhoofiyo.
Marka laga hadlayo qaabka raajka ah AutoCAD waxay leedahay wax ka yar Microstation, laakiin kuwa badanaa ku keydsan macluumaadka kor u qaadista AutoCAD waxay leeyihiin qaar ka mid ah isticmaalka guud sida kuwa ESRI. AutoDesk waxay ka badan tahay xaqiiqda "isku xirida" xogta, halka Bentley uu "wacayo tixraaca". Labaduba waxay ku jiraan qaabka qabashada radar, oo aad u yar, si ay ugu yiraahdaan ugu yaraan.
Map-ka AutoCAD AutoDesk Bentley Systems ESRI SHP
Post Previous«Previous Bentley Map waxay rabtaa inaad u guurto V8i
Post Next Diyaarinta safarkayga HoustonNext »